News banyere LG: malite, mobiles, mbadamba, mgbọrọgwụ na ndị ọzọ - Androidsis | Gam akporo (Peeji nke 3)
Etu esi wụnye mgbake ma gbanye ụdị LG G3 mba niile ma ọ bụ akara D855, ihe a niile na-adịgide adịgide na enweghị mkpa PC.
LG onye Mmepụta ogbako ilekwasị anya na iwuli modul maka G5
LG G5 bụ nnukwu ekwentị ma ọ bụ ihe ịma aka maka ụlọ ọrụ ya na modulu nke ndị mmepe nke atọ ga-arụpụtara.
LG na-ekwuputa ọkwa K5 na K8
Ekwentị ọhụrụ abụọ sitere na LG na-egosipụta izu a, K5 na K8. Nke mbụ ga - enwe Android 5.1 Lollipop na nke abụọ gaa Marshmallow
LG Tone Platinum, ekweisi ekweisi ikuku na-eguzogide ọgwụ
Mmetụta mbụ mgbe ị gbalịrị ekweisi ikuku nke LG Tone Platinum, ngwaọrụ nke pụtara ìhè maka ogo nke njedebe na mma mara mma
LG Rolling Bot, anyị nwalere LG's BB-8 robot
Nke a bụ LG Rolling Bot, ihe eji eme ihe dị ka BB-8 yana igwefoto megapixel 8 nke anyị nwere ike ịgagharị na ekwentị gam akporo anyị.
LG 360 CAM, anyị nwalere igwefoto 360 nke LG
Anyị nwalere igwefoto LG 360 CAM VR nke na-enye gị ohere ijide ihe onyonyo na vidiyo dị adị nke mebere ka elekere 13 megapixel ya abụọ.
LG Cam Plus Grip, nke a bụ otú LG G5 igwefoto modul si arụ ọrụ
Anyị na-egosi gị otu LG Cam Plus Grip si arụ ọrụ, modulu na-enye igwefoto LG G5 aka.
Anyị na-egosi gị na vidiyo otu esi agbanwe modulu nke LG G5 ngwa ngwa na mfe iji mee ọtụtụ nke modulu mbughari
Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ n'ime njirimara ọrụaka ya bụ ihe nzuzo mepere emepe, onye mepụtara ya na
LG G5 na nke Xiaomi Mi5
Anyị na-etinye ihu na ihu ihu mbụ modular smartphone LG G5 na ọmarịcha Xiaomi Mi 5 hụrụ ma na MWC
Na ntinye na-esote anyị na-ewetara gị ntụnyere mbụ dị n'etiti LG G4 VS LG G5, njedebe abụọ ikpeazụ ...
Android 6.0 Marshmallow nwere nchekwa nchekwa akpọrọ "Nchekwa Adoptable" nke LG G5 na Galaxy S7 anaghị akwado.
LG weputara LG G5, ihe ngosi modulu nke izizi nwere CAM Plus, Hi-Fi Plus, 360 VR, 360 CAM na Rolling Bot
LG na-eweta ezi omume na uru nke mbụ modular smartphone na LG G5 pụrụ iche.
LG ejiri nwayọ kwupụta K8, ekwentị nwere ihuenyo 5-inch na gam akporo 6.0 Marshmallow
LG Stylus 2 mara ọkwa na ihuenyo 5,7-inch, gam akporo 6.0 na etiti ígwè
Na Sọnde LG ga-ewetakwa Stylus 2 dị ka ekwentị pụrụ iche nwere 5,7 "ihuenyo yana stylus dị ka nkwupụta kachasị.
A ehi ehi na-azọrọ na LG G5 ga-a abụọ ihuenyo
Dị ka V10, LG G5 ga-enwe ihuenyo nke abụọ dịka otu n'ime ihe ndị a pụrụ ịtụkwasị obi ugbu a, @evleaks
LG Pay na-egbu oge ma agaghị ahụ na ngosi na February 21
, LG ekpebiela igbu oge nke LG Pay, usoro ịkwụ ụgwọ ekwentị ya, ruo nkeji nke abụọ nke 2016 iji kwado mwepụta nke LG G5
LG na-ekpughe LG X Cam na X Screen n'ihu MWC
Maka ọnwa Machị anyị ga - enwe ọhụụ na igwe LG ọhụrụ: X Cam na X Screen nke a ga - ahụ na MWC.
Ihe kachasị mkpa Samsung Galaxy S7 na LG G5 ga-eso
Fewbọchị ole na ole mgbe e gosipụtara LG G5 na Samsung Galaxy S7, enwere ọtụtụ njirimara ndị ekwentị abụọ a na-ekerịta
LG G5 gosipụtara na Geekbench na 4GB nke RAM na Snapdragon 820
LG G5 na-egosi na Geekbench ya na 4GB RAM na processor Snapdragon 820.
LG mara ọkwa Nkpuchi Ndenye maka LG G5
Ekpuchita Ndenye maka LG G5 ka ekwuputala site na onye nrụpụta Korea nwere atụmatụ ihuenyo "mgbe niile".
LG na-ewepụta ihuenyo G5 na mgbe niile na teaser
Ọrụ "mgbe niile" na ihuenyo G5 bụ otu n'ime ihe omimi anyị ga-edozi na February 21 site na enyemaka nke LG na MWC
Ihe onyonyo ohuru nke LG G5 putara n'egosi igwefoto abuo n'azu
LG ga-enwe nnukwu ọhụhụ na February 21 mgbe ọ na-eweta LG G5 na Mobile World Congress ga-eme na Barcelona
Ihe ngosi nke LG G5 ga-eme elekere ole na ole tupu nke Samsung Galaxy S7
Na February 21, LG G5 na Samsung Galaxy S7 ga-ewetara ya ihe dị iche na oge dị n'etiti ihe abụọ ahụ
LG V10 bịarutere Spain site n'aka Fernando Torres na ọnụahịa nke 699 XNUMX
LG esorola Fernando Torres jikọọ iji gosipụta ọhụụ ọhụrụ ya LG V10 nke dị ugbu a maka 699 XNUMX
LG na-ewepụta ọdụm abụọ ya nke mbụ nke usoro K ọhụrụ nke dị anya site na njedebe ndị ahụ.
Edepụtara LG K4 na weebụsaịtị LG
LG K4 bụ otu n'ime ekwentị ise dị na mpaghara K nke ga-anwa ịbanye n'ime ahịa dị iche iche dị ka ekwentị ntinye
E gosipụtara atụmatụ na igwefoto abụọ nke LG G5
New Leaked LG G5 Images Kwenye Kere na Igwefoto Dual nke Na-esote LG Flagship
LG na-ere nde 59,7 nde na 2015 ma wepụta ọkọlọtọ abụọ n'afọ a
Onu ogugu di egwu nke mepere uzo na 2016 ire ogwe abuo abuo tinyere usoro nke mobi-end
Ihe oyiyi izizi nke LG G5 ka edozichara, ọ ga - enwe igwefoto abụọ?
The mbụ ezigbo ihe oyiyi nke LG G5 e leaked egosi ya imewe na àgwà kwuchara, na mgbakwunye na abụọ n'azụ igwefoto.
N'iji ya tụnyere nnukwu ekwentị ndị ọzọ na ihuenyo ahụ, LG V10 adịghị atụle dị ka ule emere
Ihe osise na-egosi nhazi LG G5
A na-agbapụta eserese na-egosi imepụta na mgbakwunye na nha nke LG G5, LG na-esote flagship nke a ga-ewepụta na February 21.
LG ga-ewepụta ekwentị atọ ọzọ K nke ọ kpọsara na CES na Las Vegas: K4, K5 na K8. Ha sonyere abụọ ekwuputara dị ka K7 na K10
E nwere usoro nsụgharị nke na-egosi atụmatụ nke LG G5 nke ga-apụta ìhè maka ohere nke iwepu batrị ya
Taa, na vidiyo ọhụụ a, anyị na-egosi gị otu ị ga - esi melite LG G3 mba ụwa gam akporo 6.0 official LG firmware wepụtara na Poland.
LG mara ọkwa ọnụ K usoro smartphones na CES 2016
LG nwere usoro ohuru, K, iji webata ekwentị nke ga-abịa na ọnụahịa dị ọnụ, ezigbo ngwa yana usoro dị mma
LG G3 amalite ịnata gam akporo 6.0 Marshmallow nke oma dika LG Poland kwadoro
Android 6.0 Marshmallow amalitela itinye ya na LG G3 na Poland dị ka onye nrụpụtara gosipụtara site n'aka onye ọrụ ya Facebook.
LG G5 ga - abata na ihuenyo nke abụọ na igwefoto azụ abụọ
LG G5 ga-abata na nkeji iri na ise nke 2016 ma nwee ụfọdụ atụmatụ a hụrụ na V10 na G4 dị ka ihuenyo nke mbụ.
SmartThinQ Hub bụ ihe ọhụrụ sitere na LG dị ka ngwa ahịa amamịghe maka ụlọ gị
SmartThinQ Hub bụ smart n'ụlọ ngwaọrụ ga-aghọ gị ntụrụndụ na ngosi ehiwe.
LG kwuru na ereola nkeji 450.000 nke LG V10 na United States na ụbọchị iri anọ na ise
Na United States, LG erela nkeji 450.000 nke V10 naanị ụbọchị iri anọ na ise. Ọnụ ọgụgụ niile ọ na-eso anyị.
A na-enyocha nkọwa niile nke LG G5
Anyị amaworị ihe niile banyere LG G5, mana site na ntaneti ọhụụ a, anyị nwere ike mezue ihe ga-abụ ọkwa ọhụrụ nke ndị nrụpụta Korea.
Etu esi melite LG G3 na gam akporo 6.0.1 Marshmallow
Taa, anyị na-egosi gị usoro site na iji vidiyo, otu esi emelite LG G3 na gam akporo 6.0.1 Marshmallow ekele maka CM13 nightlis.
LG G Pad II 8.3 LTE bụ mbadamba gam akporo ọhụrụ nwere Stylus na ọdụ ụgbọ USB
N’ọnwa na-abịa, a ga-ebupụta LG G Pad II 8.3 LTE ọhụrụ na Korea, na-enye mkpịsị mkpịsị mkpịsị na nkwado USB zuru ezu.
Asịrị mbụ gbasara LG G5 batara: ihe mmetụta mkpịsị aka na Snapdragon 820 SoC n'okpuru mkpuchi
Asịrị mbụ banyere LG G5 abịala, LG ga-esote flagship nke a ga-ewepụta n'oge MWC 2016
LG ohuru nzọ a na-akpọ LG efu na ọ bụ a smartphone nwere a 5 ″ ihuenyo na metal ozu maka € 199
Nnukwu atụmatụ maka LG Zero ọhụrụ a nke a ga-azụta n'izu mbụ nke ọnwa Disemba maka ego nke € 199 site na ibe weebụ.
LG mara ọkwa LG Ray na ihuenyo 5,5 nke anụ ọhịa wee lekwasị anya na ahịa 3G
3G ahịa bụ ebumnuche ekwentị a nwere atụmatụ dị mma maka ọnụahịa ya. Ebee ka ọpụpụ dị na igwefoto na mgbawa.
[APK] Otu esi enyere Ndenye gburugburu na AOSP Roms maka LG G3.
Taa, anyị gosipụtara gị otu esi enyere ndị ọrụ Ntugharị Ntugharị aka na AOSP Roms na LG G3.
Rom kachasị mma maka LG G3 bụ AOSP Rom a na-akpọ XenonHD
Taa, anyị na-akọwa usoro ntinye nke ihe maka m bụ Rom kacha mma maka LG G3 mba ụwa D855, AOSP Rom dabere na Cyanogenmod 12.1 a na-akpọ XenonHD.
Rom kacha mma maka LG G3: NovaStock arụmọrụ dị egwu na batrị
Taa, anyị na akwado gị ma kuzie gị ka ị wụnye ihe kacha mma Rom maka LG G3 mba nlereanya d855
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnwale gam akporo 6.0 na LG G3 taa ị nọ na chi n’ihi na anyị na-egosi gị etu esi akụ Flash Romamalmallow site n’okpụ ụkwụ.
The Korean LG G4s amalite ịnata gam akporo 6.0
LG LG G4 nke Korea amalitela ịnata mmelite ahụ na gam akporo 6.0 M, ụdị kachasị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google
LG G3 Flex ga-abata na March 2016
Ngwaọrụ ọhụrụ sitere na akara Korea, LG G3 Flex, ga-abịarute n'afọ na-esote mana anyị amatalarị nkọwa ya.
Ọnwụnwa Androidsis ọsọ: LG G2 VS Xiaomi Mi4c
Nnyocha ọsọ ọsọ ọhụrụ nke Androidsis nke anyị na-eche LG G2 VS Xiaomi Mi4c ihu. Nye ga-emeri n’agha ahụ?
Ọ bụrụ na ị nwere mgbọrọgwụ LG ị nwere ike iwunye gam akporo 6.0
Guysmụ okorobịa nọ na XDA tọhapụrụ ụlọ nke ga-enye ndị ọrụ LG G4 n'efu ohere iji kwalite gam akporo 6.0M
LG ga - amalite iwepụta gam akporo 6.0 Marshmallow na - esote izu na G4
LG ga-amalite ịgbanye Android 6.0 Marshmallow na LG G4 izu na-abịa na Poland, na-esochi mpaghara ndị ọzọ.
LG mara ọkwa V10, ama ọhụụ ọhụụ nwere ọhụụ edepụtara maka ọdịnaya ọdịnaya ọtụtụ
LG V10 nwere ihuenyo nke abụọ eji eji ya oge niile wee si enweta ọkwa, ozi na ndị ọzọ.
LG na-ewetara ọgbọ nke abụọ nke Watch Urbane na njikọ LTE
Ọgbọ nke abụọ nke LG Watch Urbane ga-enye gị ohere ịkpọ oku ma bụrụ smartwatch zuru oke na ama.
LG Class mara ọkwa na ọkpụrụkpụ nke 7,4 millimeters na 8MP n'ihu igwefoto
Igwefoto n'ihu nke LG Klas ọhụrụ bụ otu ihe ahụ dị ka LG G4, yabụ anyị na-eche ihu ama ama pụrụ iche maka foto selfies.
LG Nexus 2015 na 3 GB nke Ram, Snapdragon 808 na 2700 mAh
New asịrị-egosi banyere ọdịnihu nkọwa nke 2015 Nexus ọnụ arụpụtara site LG.
Nexus 5 nkọwa leaked: metal ahụ, 5,2 ″ ihuenyo, n'ihu okwu, akara mkpisiaka mmetụta na USB Type-C
LG si Nexus 5 nọ na mmepe ma ntakịrị akụkọ akụkọ ndị ọzọ na - apụta, oge ugbu a ọ ruru nkọwa ndị a.
LG G4 tinyere Drone, nke a bụ ka igwefoto LG G4 si dị egwu
Taa, anyị na-egosi gị vidio ọhụrụ a edere ya na igwefoto LG G4 site na mmiri.
More data leaks si LG G Pro 3
Ndị Korea na-arụ ọrụ na ụdị ọhụụ nke ngalaba LG G Pro ha, ọ bụ ọgbọ nke atọ na a ga-akpọ ya LG G Pro 3.
Nnukwu nche oghere na LG niile ọnụ. Modelsdị niile na nsụgharị !!
Achọpụtara nnukwu oghere nchebe na ngwụcha LG niile nwere ike ịmetụta ụdị niile na nsụgharị nke Smartphones na Mbadamba nke mba Korea.
Mmetụta !! Rom Evomagix Stock 30E maka LG G2. Official Lollipop !!
Taa m ga-ahapụrụ gị usoro nwụnye nke ihe maka m n'onwe m ugbu a bụ ihe kacha mma Rom Lollipop, nke Rom Evomagix Stock 30E maka LG G2.
LG mara ọkwa Band Play, smartphone na-elekwasị anya na ogo ọdịyo
LG Band Play bụ ngwaọrụ ọhụrụ sitere na onye nrụpụta Korea na-elekwasị anya na ọdịyo na ndị okwu 1W na LG QuadBeat 3 ekweisi.
LG G4 Pro nkọwa na-leaked
Ngwaọrụ ọhụrụ sitere n'aka onye nrụpụta Korea dị na Chakwasa ihie, ọ bụ LG G4 Pro na-abịanụ. Otu ụdị dị mma nke ọkọlọtọ ugbu a.
LG G4, nke dị ka ọnụ na mmeri niile, na-eweta nsogbu na ntanetị aka ya. Anyị na-agwa gị ihe na-eme.
LG na-akwadebe ọkọlọtọ ọhụrụ maka etiti afọ a
LG nwere ike iwepụta ọhụụ ọhụrụ na ọkara nke abụọ nke 2015. Ọ ga-abụ LG G Pro 3?
LG mara ọkwa G4 Stylus na G4c, ụzọ abụọ dị ọnụ ala nke G4
LG ekwuputala ọbịbịa nke ngwaọrụ ọhụrụ abụọ: G4 Stylus na G4c. Otu na udi nke phablet na ndi ozo “mini”.
LG G4 ga - ebido ire n’izu a
LG bidoro site na mbido G4 zuru ụwa ọnụ site na kesaa ya n'ọtụtụ mpaghara dị mkpa ka o wee nwee ike iru ndị ọzọ
Kedu ihe 2015 Nexus kwesịrị ịbụ ihe ọ dịbu?
Asịrị na-egosi na a ga-enwe njedebe Google abụọ n'afọ a, mana gịnị ka 2015 Nexus kwesịrị ịbụ ihe ọ dị na mbụ?
LG Ugbu a Na-ekwu G4 Ga-enye Ndenye Nchaji 2.0 Nkwado
LG chefuru banyere ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa mgbe a mara ọkwa G4 ugbu a na-ekwu na ọ na-enye ndọtị Ndenye 2.0
Huawei na LG ga-abụ ndị nrụpụta nke Nexus na-esote nke ga-apụta n'afọ a
Google ga-ewepụta maka oge mbụ na akụkọ ntolite ya, Nexus abụọ na njedebe nke afọ a. LG ga-arụpụta nke mbụ nke Huawei.
Ọnụahịa nke LG G4 bụ ọnụ ala nke usoro gam akporo dị elu
Anyị amatalarị ọnụahịa nke LG G4 nke ga-abụ ọnụ ala karịa oke gam akporo gam akporo niile. Ọnụ nke flagship ọhụrụ bụ 649 euro.
LG G4 kọmpat, nsụgharị maka etiti
LG G4 Compact ga-abụ ụdị nke flagship maka ndị South Korea na-arụ ọrụ n'etiti gam akporo.
Nke a bụ otu ihe mmetụta agba dị iche iche nke LG G4 na-arụ ọrụ
Anyị na-egosi gị nkọwa niile nke ihe mmetụta dị iche iche na-acha agba nke LG G4, ihe mmetụta dị mma nke na-enwupụta ọkụ iji nye foto na ụda olu.
LG na-egosi LG G4
Mgbe ọtụtụ nkwuputa gasị, taa bụ ụbọchị ahọpụtara maka ụlọ ọrụ South Korea iji gosipụta ọkọlọtọ ọhụrụ ya, LG G4.
Nke a bụ igbe LG G4
N'ime awa ole na ole o gosipụtara ya, igbe ahụ ga-enwe LG G4 ọhụrụ ka edozichara, nnukwu ekwentị nwere nkọwa iji banye na akaụntụ
Nexus 5 2015 ọ ga-adị ka nke a?
Google enweela ike ịgbapụ ihe ga - abụ njedebe ọzọ ya, enwere ụdị nke Nexus 5 2015?
LG na-aga n'ihu ịnya isi nke ihuenyo LG G4
Ndị nrụpụta ụlọ ọrụ South Korea ewepụtala vidiyo abụọ nke flagship na-abịa n'ihu, LG G4.
Igwe LG G4 agaghị adị ka curọd dị ka LG G Flex 2
A ga - ewepụta ọkọlọtọ na - esote, LG G4 na Eprel 28 na agbanyeghị na ihe niile gbasara ọdụdụ ahụ abanyela, ihuenyo ya agaghị agagharị.
Ekwuputara LG G Stylo nke nwere 5,7 ″ ihuenyo, Snapdragon 410 na Lollipop
LG mara ọkwa G Stylo ọhụrụ, ekwentị nwere ihuenyo 5,7, Snapdragon 410 na Android 5.0 Lollipop, ọ na-eji mkpịsị mkpịsị odee abịa.
LG bụ onye ọsụ ụzọ na ịkụ nzọ na nkwalite akọwapụtara. Na nke a, mwepụta nke LG G4 agaghị abụ ihe dị iche ma ha na-agbanye ego na nkwa ọzọ.
Taa, m na-egosi gị ụzọ dị mfe iji weghachite okpukpu abụọ na LG G2 mgbe ị tụfuru ya mgbe ọ na-egbu Stock rom.
Taa, m na-egosi gị ụzọ kachasị mma iji melite LG G2 na Android Lollipop na-enweghị mgbake ma ọ bụ mgbọrọgwụ, ekele maka Rom a na-akpali akpali site na Evomagix.
LG gosipụtara omume ọma nke igwefoto LG G4 na vidiyo teaser
Na vidiyo teaser ohuru, LG gosipụtara ikike ọ ga-enye onye ọrụ ya na njirimara igwefoto G4
LG na-etu ọnụ nke ihuenyo LG G4 ya na vidiyo ọhụrụ
Arebọchị ole na ole ga-abụ LG, LG G4 gosipụtara n'ihu ọha.
LG G4: Ihe niile ị chọrọ ịma tupu ya igba egbe (Minisite leaked)
The hacker Evan Blass ekpughela na ọ chọtara minisite ezubere maka mwepụta nke LG G4 nke taa anyị na-egosi gị na ihuenyo.
LG G4, agba ọhụrụ, igwefoto dị ike na ọtụtụ, ọtụtụ leaked oyiyi
Enweghị ihe ijuanya maka ihe ụlọ ọrụ Korea ga-eweta banyere LG G4. N'ihi ihihi mmiri anyị nwere ike ịmata ihe niile gbasara ya.
Gam akporo Lollipop 5.0.2 dị ugbu a maka LG G Pad 10.1 na Androidsis anyị na-egosi gị otu usoro mmelite dị mfe site na OTA.
Igwe foto dị elu nke LG G4: azụ azụ 16MP nwere oghere f / 1.8 na 8MP n'ihu
LG ji nwayọọ nwayọọ na-egosi omume ọma nke G4 ọhụrụ ya nke a ga-ewepụta na Eprel 28. Oge nke a bụ oge maka igwefoto
Usoro ahia ohuru nke LG: Ndị ọrụ 4 ga-anwale G4000
Ndị na-emepụta Smartphone na-aga n'ihu ịchọ usoro azịza ahịa ọhụụ. Ugbu a, anyị hụrụ na LG na-enye ndị 4000 LG G4 ọrụ ndị na-anwale ya.
LG ga - ahọrọ ndị ọrụ 4000 iji nwalee G4 tupu ya amalite
LG ga - ahọrọ ndị ọrụ 4000 iji nwalee akara ngosi G4 ọhụrụ ya site na mba 15 tupu ịmalite ya zuru ụwa ọnụ
LG weputara G4 Video Teaser
Anyị nwere vidiyo teaser nke LG G4, ọkọlọtọ ọhụrụ nke onye nrụpụta Korea maka 2015 na nke ahụ ga-abịarute na foto ka mma
LG na-akuzi UX 4.0 n’ihu nke LG G4
LG G4 ga - abata na akpụkpọ anụ nke ya na UX 4.0. Otu interface nke agaghị eme ka ọ dị mma kama ọ ga-enwe ọrụ ọhụụ
Okwu LG G4 na-egosi ntụgharị nke ngwaọrụ ahụ
Otu ikpe na-egosi LG G4 na ọdịdị ọdịdị ya dị ka ọ dị na ngwaọrụ dị iche iche nke onye nrụpụta Korea
LG G2 Flex na-enweta ụdị nnwale ọ bụla
Ngwaọrụ kachasị ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ South Korea, LG G2 Flex agbanweela ụdị ule ọ bụla.
Ekwentị a nwere ike ịbụ LG G4?
LG G4 ga-abata na ọnwa ndị na-abịanụ ma anyị nwere ọtụtụ onyonyo nke ekwenti ekwenti nke ụlọ ọrụ Korea
LG G4 ga-adị ka nke ọ bụla n'ime nsụgharị ndị a?
Ka anyị na-eche maka ngosipụta nke ngosipụta LG nke na-esote, LG G4, anyị hapụrụ gị ụfọdụ ntụgharị nke ihe South Korea ga-adị.
Ntuziaka dị mfe dị mfe iji nweta mgbọrọgwụ LG G3 na android Lollipop.
Taa, anyị ewetara gị otu ụzọ kacha mma iji melite LG G2 na gam akporo Lollipop official Stock, ụzọ abụghị onye ọzọ karịa site na Rom esiri esi dabere na ngwa ngwa mbụ gam akporo 5.0.1 LG Lollipop
LG nwere ike ịmalite Phablet nke anụ ọhịa 5 nke anụ ọhịa
Onye nrụpụta LG, ga-anọ na njedebe nke ịmalite phablet nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 6 "sentimita asatọ nke ihuenyo iji merie Samsung Note Note.
Tụnyere Apple Watch na LG Watch Urbane
Anyị na-etinye Apple Watch ọhụrụ n'akụkụ ibe ya megide LG Watch Urbane, ihe abụọ dị iche iche nwere uwe nwere akụkụ anọ na okirikiri ọzọ.
Etu ị ga-esi laghachi na LG G2 D802 site na gam akporo Lollipop gaa na Android Kit Kat na-enweghị mkpa maka Ngwaọrụ Flash na enweghị mgbake mgbake ma ọ bụ mgbọrọgwụ.
N'ebe a, m na-egosi gị otu ị ga - esi melite LG G2 na LG Lollipop nke LG na - eji omenala a Rom nke ihe nlereanya Korea nke ga - enyere anyị aka ịchekwa ikikere mgbake na mgbọrọgwụ.
Otu ọnwa a, LG ọhụrụ iko eziokwu ga-adị, LG G3 VR, nke ga-abụkwa n'efu maka ndị na-azụta LG G3.
LG na Audi smartwatch na WebOS na-arụ ọrụ
Ugbu a, anyị ewetara gị ihe ịtụnanya na-atọ ụtọ: LG smartwatch enigmatic emere maka Audi na-arụ ọrụ na WebOS
Otu esi emelite LG G3 na gam akporo 5.0 CM12 [Model D855]
Taa m na-akọwa otu esi emelite LG G3 na gam akporo 5.0 Lollipop iji Cyanogenmod 12, CM12
LG G Flex 2 Nkọwapụta ọkwa gọọmentị
Anyị amatala nkọwa ndị ọrụ LG G Flex 2 si n'aka ndị mba Korea n'onwe ya.
Otu esi emelite LG G2 gị na gam akporo 5.0 site na iji Cyanogenmod 12
Taa, m na-egosi gị otu esi emelite LG G2 na gam akporo 5.0 ekele CM12
LG G Flex 2: LG gosipụtara ụwa anụ ọhịa ọhụrụ ya na ihuenyo ihu
LG ka gosipụtara LG G Flex 2015 a na-atụ anya ya na CES 2, ọnụahịa nwere atụmatụ ndị na-eto ya na mpaghara ahụ.
Etu ị ga - esi melite LG G2 na ihe ọhụrụ CM12 na - akwadoghị gam akporo 5.0.1 (D802 Model)
Etu ị ga - esi melite usoro site na usoro yana ihe niile ịchọrọ LG G2 ka CM12 na - akwadoghị gam akporo 5.0.1 Lollipop
Android 5.0 Lollipop na-abịa LG G3 n'efu
LG ka weputara nkwupụta mgbasa ozi na-ekwupụta na ụdị LG G3 bụ n'efu anatala gam akporo 5.0 Lollipop
Nnwale ọsọ ọsọ: Nexus 6 VS LG G2
Taa, anyị na-eche ihu nyocha nke onwe anyị, Nexus 6 VS LG G2, ọnụ abụọ nkewapụrụ site na nnukwu ọnụahịa.
Taa, m na-akọwa etu ị ga - esi melite LG G2 gị na nke izizi mbụ nke European firmware D80220H. Otu ụzọ na-edebe Mgbọrọgwụ na Iweghachite na ọzọ ịhapụ ya site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-enweghị mgbọrọgwụ yana nke mbụ LG Recovery ngwaahịa.
A ga-egosipụta LG G Flex 2 na CES 2015
LG G Flex 2 ga-abata na mbido afọ a ma nwee ike gosipụta ya na CES 2015, nke a na-eme n'izu mbụ nke ọnwa Jenụwarị n'obodo Las Vegas.
LiquiSmooth, Rom Android 5.0 Lollipop maka LG G2 (ụdị ya niile)
Lee ị nwere nke maka echiche m bụ ihe kacha mma gam akporo 5.0 Lollipop Rom maka LG G2 ụdị ya niile.
Idozi nsogbu enwere ike na LG G2 mgbe emelite na-akwadoghị na gam akporo Lollipop
Ndị a bụ azịza maka nsogbu ndị dị na LG G2 mgbe mmelite na-akwadoghị na gam akporo Lollipop.
[Kwadoro] Otu esi emeliteghị LG G2 na Android 5.0 Lollipop Model D802
Ọzọ m na-egosi gị ụzọ ziri ezi iji melite LG G2 na gam akporo 5.0 Lollipop site na iji Rom a na-edeghị iwu nke EvoMagic kere.
Nwere ike imelite LG G3 gị na Android 5.0 Lollipop (naanị F300S nlereanya)
Anyị enweela mbụ KDZ gam akporo 5.0 Lollipop KDZ maka LG G3 nlereanya F300S, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike imelite LG G3 gị na 5.0 Lollipop.
Ihe oyiyi mbụ nke gam akporo 5.0 Lollipop na LG G3, ụzọ dị mma iji bulie mmelite!
Ihe oyiyi mbu nke LG nke UI dị egwu nke gam akporo 5.0 Lollipop na LG G3 abanyelarịrị.
LG G2 Roms: Miui V5 4.10.24 dabere na LG mbụ Stock D80220C
Lee ị nwere vidiyo na usoro ntinye niile maka gị ibudata ma nwalee Miui V5 4.10.24 dabere na Stock D80220C maka LG G2 anyị.
LG G Watch R dị ugbu a na Amazon Spain
Storelọ ahịa Amazon nwere nkeji LG G Watch R, nke mbụ smartwatch nwere akara okirikiri zuru ezu.
LG F490 L, LG mbụ ama na NUCLUN processor
E gosipụtara àgwà LG F490 L, ekwentị izizi nke nwere NUCLUN processor, nke LG rụpụtara.
Etu ị ga - esi wepu 150 Mb RAM na LG G2 anyị n’atụmatụ a dị mfe
Ọzọ m ga - egosi gị aghụghọ dị mfe iji hapụ RAM na LG G2, ihe dịka 150 Mb karịa RAM efu.
Lee, ahapụrụ m gị ntụnyere a n'etiti Nexus 6 na LG G3 ka ị nwee ike ikpebi nke ga-aba uru karịa gbasara ego
Otu esi ahapụ LG G2 site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọ dị mma iziga na SAT
Lee ị nwere otu ụzọ kachasị mfe ịhapụ LG G2 gị site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-enweghị mkpa kọmputa nkeonwe ma ọ bụ iji ngwaọrụ ndị na-egbu maramara dị mgbagwoju anya.
Lee ị nwere ụzọ kachasị mfe iji wụnye Root LG G2 na gam akporo 4.4.2 iji nwee ike ịwụnye TWRP Iweghachite, ihe niile na-enweghị ịbanye na PC ma dị mma maka ụdị LG G2 niile.
LG nyere gị euro 50 mgbe ịzụrụ LG G3
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịzụta LG G3, rite uru n'ọkwalite ọhụụ nke onye nrụpụta Korea, nke na-alaghachi euro 50 mgbe ịzụrụ ọdụ
LG G2: zuru ezu LG G3 isiokwu maka Roms Cyanogenmod 11 na 11S Free!
Lee ị nwere isiokwu LG G3 kachasị mma maka LG G2 na Rom Cyanogenmod 11 ma ọ bụ CM11s.
Lee ị nwere ụzọ ziri ezi iji budata ma wụnye Remote Nweta na LG G2 na AOSP Rom.
LG's Smart Wine, gam akporo 4.4.4 KitKat nwere ikuku ikuku
LG's Smart Wine bụ njedebe gam akporo dị iche na nke anyị hụgoro, njedebe nke na-echetara anyị ma ọ bụ na-ebuga anyị oge ọla edo nke ekwentị mkpanaka.
Site na aghụghọ a, anyị ga-echekwa batrị na LG gị site na ịgbalite nhọrọ ngwa ngwa ngwa ngwa na menu ọrụ
LG G Vista, nyocha vidiyo
Nyocha vidiyo nke LG G Vista, ọhụụ ọhụrụ nke onye nrụpụta Korea nke ga-abịa na ezigbo ọnụahịa mara mma: euro 399.
Site na IFA 2014 anyị ewetara gị vidiyo ọhụrụ nke LG G3 Stylus, ọhụụ ọhụụ ọhụụ sitere n'aka onye nrụpụta Korea
Anyị nwalere LG G Watch R na IFA14 na Berlin
Site n'ụlọ ntu LG na IFA 14 anyị nwalere ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọhụrụ LG G Watch R.
Chaja mara mma maka LG G Watch
Mgbasa Indiegogo nke chaja isi maka LG G Watch na ị gaghị enwe ike ile anya n'ihi oke mma ya
LG G3 Stylus bụ onye ọrụ ugbu a: qHD ihuenyo na 1.3GHz quad-core chip
LG G3 Stylus bụ otu n'ime nsụgharị dị ala nke ngwaahịa LG G3
Ndị ọrụ LG G3 na-eme mkpesa banyere mpaghara igwe okwu gbajiri agbaji
Ndị ọrụ LG G3 na-ahụ otu ha si achọta ezumike nke na-ebilite site na igwe okwu igwe na ekwentị ha
[APK] Download na wụnye LG G2 igwefoto na Slow Motion nyeere
N'ebe a, ị nwere ngwa nke igwefoto LG G2 nwere ọtụtụ ọrụ dị mma yana arụ ọrụ Slow Motion.
LG na-ekwuwapụta L Fino na L Bello maka njedebe dị ala mana ejiri mmetụta G3
Ekwentị ọhụrụ abụọ sitere na LG bụ L Fino na L Bello. Ọnụ abụọ nke ala dị ala na njirimara dị mma na igwefoto
LG ga-eweta usoro omenala nke LG G3 software na ngwaọrụ ya niile
LG na-eme akwa oyi akwa nke LG G3 sọftụwia ọkọlọtọ maka ngwaọrụ ya niile
Roms LG G2: ingwụnye ma nwalee 7Rom Port nke LG G3
Taa na ngalaba Roms LG G2 anyị chọrọ igosi gị otu esi etinye 7Rom, ọdụ ụgbọ mmiri nke LG G3 yana akpa ya na atụmatụ ya.
Rom kachasị mma maka LG G2 a na-akpọ Cloudy na ọ bụ Port nke LG G3
Lee ị nwere ihe e kwere na nkwa na ule vidiyo nke LG G2 na LG G3, Rom kachasị mma maka LG G2 nke na-abụghị onye ọzọ karịa ọdụ ụgbọ mmiri nke LG G3 nke igwe ojii G3 Cloudy mere.
Kpọghe LG si bootloader ga-eze-ekwe omume na-adịghị oke anya n'ọdịnihu
Site na onye otu XDA, Wolfgart, anyị nwere ike ịmata na LG na-arụ ọrụ na ngwọta gọọmentị maka Unlock LG's bootloader na eze.
[Nnwale vidiyo] LG G3 na LG G2: ule ọsọ
LG G3 na LG G2 bụ esemokwu dị n’etiti nnukwu LG abụọ ndị a nke anyị chọrọ ịlele arụmọrụ na ọsọ ọsọ mgbe ị na-eme ngwa.
LG G3 Stylus nwere ike ịbụ onye osompi nke 4 Galaxy Note?
LG G3 Stylus hụrụ na vidiyo nkwado nke ụlọ ọrụ Korea nwere ike ịbụ onye na-asọ mpi megide 4 Galaxy Note
LG G2 Obere
LG G2 Mini bụ nzọ ọhụrụ nke ndị na-emepụta Korea nke na-ewetara obere nsụgharị LG G2 toro eto.
LG G Vista mechara nọrọ dị ka ezigbo etiti igwe
LG G Vista ahụbeghị ma ọ ga-erute mba ndị ọzọ dịka ekwentị dị n'etiti etiti nwere ezigbo atụmatụ.
Etu esi etinye Rom nke OnePlus One na LG G2 mba
Lee ị nwere faịlụ niile na usoro nrụnye kọwara nke ọma site na ntinye iji wụnye OnePlus One Port na mba LG G2.
LG G3 ntachi obi ule
N'ebe a, anyị ewetara gị otu n'ime ule ntachi obi a nke na-afụ ụfụ naanị site n'ile anya na onyogho, nke LG G3 doro atọ dị iche iche na mberede.
LG weputara Egwuregwu izizi na LG G3 ngwa ngwa
LG G3 na ikpe ya ngwa ngwa nwere egwuregwu mbụ enwere ike igwu na enweghị mkpa imeghe ekwentị
[ROM] Otu esi agbanye LG G2 ka ọ bụrụ LG G3
Lee ị nwere vidiyo na ọnọdụ nwụnye nke otu LG G3 kachasị mma roms na ụzọ dị mma iji gbanwee LG G2 na LG G3.
Lee m hapụrụ gị ihe niile ịchọrọ iji nweta ikikere mgbọrọgwụ na LG G3 ma ọ bụghị ịnwụ ịnwale, na mgbakwunye na ịkọwa ya site na nkwụsị.
LG G3, smartphone kacha mma dị elu?
A na-eto LG G3 dị ka ọnụ ọgụgụ kachasị mma kachasị elu na-ekele ya na ihuenyo ya, arụmọrụ ya na njikarịcha ya.
LG G3 Beat na ihuenyo 5 and na etiti nkọwa dị ugbu a
LG G3 Beat ga-egosipụta ebe a na Europe dị ka LG G3 S, ụdị "mini" nke LG G3.
Ihe oyiyi izizi nke LG G3 Mini pụtara na China
Ihe oyiyi mbụ nke LG G3 Mini agbaala agba, ebe anyị nwere ike ịhụ atụmatụ ya, nke nwanne ya nwoke nke okenye tọrọ.
Leaked ọrụ ntuziaka maka LG G3 S (G3 mini)
LG G3 S bụ aha ọhụrụ nke ga - abụ LG G3 Mini ka amụrụ ya site na ntuziaka onye ọrụ na - arụ ọrụ
Anyị na-egosi gị otu esi ewepụta nseta ihuenyo na LG G3, otu nwere igodo ahụ na ọzọ na QuickMemo +
LG G3 Prime ga-abata maka oge mgbụsị akwụkwọ ọ bụ ezie na ndoputa dị ugbu a iji nweta ya na Korea
Wepụtara nkọwa nke G Vista, LG nzọ maka n'etiti-nso
Ihe onyonyo na nkọwapụta LG’s G Vista abanyela na nzọ ọhụrụ ụlọ ọrụ Korea nyere maka etiti
[APK] Wụnye naanị LG Health ngwa nke LG G3 na LG gị
N'ebe a, m hapụrụ gị ihe niile ịchọrọ na ihe achọrọ iji zute LG Health ngwa nke LG G3 na LG G2.
Ihe kachasị mma na LG G3 + LG G Watch Ebee ka njide?
Mwepụta nke LG G3 abatala na onyinye. Taa anyị na-enyocha ma ọ bụrụ n’ezie aghụghọ dị n’azụ ha ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ atụmatụ azụmaahịa ọhụrụ.
Meziwanye arụmọrụ nke LG G2 site na imelite ya na gam akporo 4.4.4
You chọrọ ịma otu esi eme ka ọrụ LG G2 dịkwuo mma? Lee, ị nwere nsụgharị nke ule Antutu ikpeazụ emere na ọnụ m.
Wepụtara njirimara niile na onyonyo nke LG G3 mini
Anyị nwere atụmatụ mbụ na onyonyo nke LG G3 mini, ọnụ ọhụụ ọhụrụ LG na-ezube ịmalite n'oge na-adịghị anya.
Otu esi melite LG G2 na gam akporo 4.4.4
Lee, m na-egosi gị ụzọ ziri ezi iji melite LG G2 na gam akporo 4.4.4 site na ịwụnye AOSP Rom dị ka Cyanogenmod na nsụgharị Nightly ya.
LG G3 mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ na-amalite na ụbọchị 3
LG G3 ga-apụta na ahịa ụwa niile malite na June 27 na mba Asia dị iche iche wee rute Europe na US.
LG gosipụtara njirimara nke LG G Pad ọhụrụ ya na vidiyo nkwado
LG G Pad bụ mbadamba ihe na-adọrọ mmasị nke ụlọ ọrụ Korea mepụtara na ị nwere ike ịhụ na ọrụ na vidiyo nkwado a
Melite LG G2 na gam akporo 4.4.3 site na iji OmniRom
Taa, m na-egosi gị otu ị ga - esi melite LG G2 na gam akporo 4.4.3 site na OmniRom, otu kachasị mma AOSP ROM nke anyị nwere ike ịchọta maka G2 anyị.
LG G2 ntachi obi ule
Lee ị nwere vidiyo nke a na-eme nnwale nguzogide na LG G2, otu n'ime njedebe isi nke akara ọhụrụ nke LG Smartphones
Lee ị nwere keyboard nke LG G3 iji nwee obi ụtọ na gam akporo ọ bụla nwere nsụgharị 4.4.2 na nke gbanwere Mgbọrọgwụ na Iweghachite.
LG G3 ọ bụ ihe ịga nke ọma?
Ulo oru nke isi nke Korea LG aburula okwu nke otutu nyocha na ntule. Taa, anyị na-eche ma LG G3 nwere ihe ịga nke ọma.
LG G3 dị mfe ịrụzi
Mgbe ha gbasasịrị LG G3, ndị otu IFIX mere ka o doo anya na ekwentị ọhụrụ LG dị mfe ịkwadebe
Budata akwụkwọ ahụaja LG G3
Lee, m ga-ahapụrụ gị ndị hụrụ Tunning gam akporo, na akwụkwọ ahụ aja nke LG G3, ọnụ ya na ọha mmadụ ụnyaahụ.
Miui V5 na Spanish maka LG G2 abụworị eziokwu
Lee ị nwere Rom Miui V5 mbụ na Spanish maka LG G2 zuru oke yana arụmọrụ 100 x 100.
Emeela ka LG G3 gosipụtara n'ihu ọha, nke pụtara maka ike ya na ọnụego ya gbanwere: LG G3 ga-efu euro 699
Enwere ike iji oku LG G Watch mee oku
Otu n'ime njirimara bụ isi nke ihe ọhụrụ ahụ sitere na ụlọ ọrụ Korea bụ na enwere ike ịkpọ oku na LG G Watch
LG G3 wireless chaja: 10 dị na nhazi na arụmọrụ
Onyonyo nke LG G3 wireless chaja na-leaked egosi a nnọọ mma na ọtọ imewe
Vidio mbụ nke LG G3 Rolling Quick Circle
Lee ị nwere vidiyo izizi nke LG G3 Rolling Quick Circle, ọrụ dị egwu nke okwu ịtụnanya ya.
Trio nke vidiyo nkwado maka LG G3 gosipụtara ihuenyo, imewe na igwefoto
Vidio nkwado atọ nke LG G3 na-egosi ihe kachasị mma ekwentị a na-eche ogologo oge site na ụlọ ọrụ Korea ga-enwe
Ihe onyonyo ohuru nke LG G3 D855 gosiri batrị na oghere microSD
Foto nke LG G3 na nkọwa ndị pụtara ịnwe batrị nwere ike iwepu na kaadị microSD
LG L35 bụ onye ọrụ gọọmentị ugbu a, ekwentị kachasị obi umeala nke ụlọ ọrụ Korea
LG L35 na-ahapụ ihe ọ bụla a hụrụ ruo ugbu a na ikike dị iche iche dị elu na nnukwu igwe
LG weputara LG G3 QuickCircle Case
Ihe nkiri vidio na-egosi LG G3 QuickCircle gọọmentị nke ga-enwe arụ ọrụ karịa nke nkịtị
LG G3 nwere ike ịbụ ihe dịka Samsung Galaxy S5
Anyị amaraworị nha nke LG G3, nke ga-enwe akụkụ dị ka nke Samsung Galaxy S5, ọ bụ ezie na nnukwu ihuenyo na njirimara ka mma.
Possibledị abụọ dị iche iche nwere ike ịdị na LG G3 dị na FCC
E gosipụtara ụzọ enigmatic abụọ D850 na D851 na FCC, nke nwere ike ịbụ ụdị abụọ nke LG G3
Ihe oyiyi ajuju nke wijetị Ngwa ngwa ngwa LG G3
Ọzọkwa Evleaks na-ahụ maka nzacha ihe oyiyi ọhụrụ na-egosi wijetị windo windo ọhụrụ nke LG G3.
Wepu ngwugwu zuru ezu maka LG G2 n'efu
Lee ị nwere njikọ kwụ ọtọ iji budata isiokwu 16 maka LG G2 n'efu na usoro APK maka ntinye dị mfe.
Roms maka LG G2: ArdeDevTeam V2 Rom Kit Kat nke oge a
Lee ị nwere otu ROM kacha mma maka LG G2, ArdeDevTeam V2 nwere ọrụ nke Lg G Pro 2 na G Flex.
New oyiyi nke LG G3 leaked ke ọlaọcha na nwa
E bipụtara onyonyo ọhụụ nke LG G3, kpakpando na-esote nke onye nrụpụta Korea nke na-ezube iguzo na Samsung S5.
LG G3 ga-abụkwa mmiri na-adịghị
New leaks na-akọ na LG G3 ga-mmiri na-egosi na ọ ga-enwe 5.5-anụ ọhịa ihuenyo
Gbanye LG G2 gi na Nexus 5 nke vitaminized na Madhi Rom
Ọzọ m ga-egosi gị otu esi agbanye LG G2 gị na Nexus 5 nke vitaminized na-eji ihe amamịghe Rom Kit Kat AOSP ma ọ bụ ezigbo gam akporo a na-akpọ Madhi Rom.
LG G Flex, nke mbụ ama ama nwere ihuenyo na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe, rutere na ahịa site n'aka onye Korea buru ibu.
Rom Assics V4 gbakwunyere. Ihe kacha mma Rom Kit maka LG G2
Taa achọrọ m ịhapụ gị usoro nwụnye nke bụ maka ọtụtụ ndị ọrụ kacha mma gam akporo Rom Kit Kat maka LG G2.
LG jisiri ike nweta ebe na mpaghara nke smartphones dị elu n'ihi ekele ya ...
LG G2 igwefoto mod ma ọ bụ otu esi eme ka igwefoto nke LG G2 gị ka mma
Mgbe ahụ, m ga-ahapụrụ gị maka ibudata igwefoto igwefoto nke LG G2 nke gosipụtara mma igwefoto LG G2.
Anyị nwere mgbọrọgwụ maka LG G2 na gam akporo kit kat
Anyị nwere usoro iji nweta ikikere mgbọrọgwụ maka LG G2 na gam akporo Kit Kat.
[APK] LG G2: Download the official LG G Flex isiokwu
N'ebe a, m na-ahapụ APK na nbudata na ntinye maka LG G2 nke isiokwu gọọmentị nke LG G Flex.
LG G2: Etu esi wụnye mgbake gbanwetụrụ na gam akporo 4.4.2 Kit Kat
Nzọụkwụ zuru ezu site na nkuzi ebe m na-egosi gị otu ị ga-esi laghachi na Android 4.2.2 na LG G2 iji nwee ike imelite gam akporo Kit Kat ma ghara idafu Iweghachite.
Etu ị ga-esi melite LG G2 na gam akporo 4.4.2 Kit Kat na-enweghị tufuo ihe gbanwere
Lee, m na-ewetara gị nkuzi iji melite LG G2 anyị na gam akporo 4.4.2 Kit Kat na-enweghị ida mgbọrọgwụ dị oke ọnụ ahịa ma ọ bụ ihe mgbake gbanwere.
LG weputara koodu ntinye maka LG G2 Kernel Kit Kat. Next gbanwetụrụ Recovery na anya!
Ntọhapụ ndị ọrụ gọọmentị Kernel Kit Kat nke LG G2 na-adịbeghị anya bụ ozi ọma ebe ọ bụ na n'oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe mgbake gbanwere ogologo oge.
Arịrịọ Ọgụgụ: Esi mgbọrọgwụ LG G pro Lite Taa
Na nke ọhụrụ a nke agụ Arịrịọ anyị chọrọ ịhapụ nkuzi maka mgbọrọgwụ Lg G pro Lite na Lite Dual.
LG G2, ihe ngosi mbụ m nwere na mmelite gọọmentị na gam akporo 4.4.2 Kit Kat
N'ebe a, m na-aza ụfọdụ ajụjụ ndị ọrụ banyere mmelite ọrụ LG maka LG G2 na gam akporo 4.4.2 Kit Kat.
Etu esi melite LG G2 Model D802 na gam akporo Kit Kat
Site na sistemụ a, na mgbakwunye na mmelite anyị LG G2 na gam akporo 4.4.2 Kit Kat, anyị nwekwara ike ịhapụ ha ka ha gbanye mgbọrọgwụ.
Kedu ka ihe onyonyo nke LG G2 si arụ ọrụ? LG jiri ọkụkọ kọwaa ya
Vidio mgbasa ozi na-amasi ebe ha gosipụtara anyị etu eserese nke LG G2 si arụ ọrụ
LG G2 ọrụ mmelite na gam akporo 4.4.2 maka izu na-abịa
Dị ka asịrị ndị ọhụrụ si kwuo, nkwalite ọrụ a tụrụ anya na gam akporo 4.4.2 Kit Kat maka LG G2 Model D-802 ga-abụ n'oge MWC 2014
Iris ma ọ bụ ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na LG G3?
A nụrụ asịrị na LG G3 ọhụrụ a tụrụ anya ya nke a ga-ewepụta na Mee ga-enwe ihe nrụpụta mkpịsị aka ma ọ bụ ihe mmetụta iris.
Etu esi wụnye mgbake gbanwere nsụgharị niile nke LG G2
Lee ị nwere ngwá ọrụ maka Windows nke ga - enyere anyị aka ịwụnye Iweghachite gbanwetụrụ na ụdị LG G2 niile.
Samsung Life Times, akwụkwọ edemede Samsung ma ọ bụ akwụkwọ LG Life Life?
Ihe Samsung n’enye anyi dika Life Times, akwukwo eji ede akwukwo ohuru ohuru, diri otutu oge ma ana akpo Life Square nke LG.
Kụrụ aka Gbanyụọ ọrụ nke LG G2 maka gam akporo AOSP (mgbọrọgwụ)
Otu esi eme ka LG G2 na LG Flex Knock Off na usoro Xposed a.
CES 2014: LG na-egosi ya LifeBand Touch smart mgbaaka
Ọhụrụ LG LifeBand Touch smart mgbaaka ka ekpughere na CES 2014 na Las Vegas
LG: Etu esi eji nhọrọ ikuku
Nhọrọ nchekwa ikuku na LG dị ka LG G2 na-enye anyị ohere ịnyefe faịlụ na-enweghị mkpa eriri.
Etu esi melite LG G2 na gam akporo 4.4.2 Kit Kat jiri ParanoidAndroid
Nkuzi nzọụkwụ site na ntinye na ihe niile ịchọrọ iji melite LG G2 na gam akporo 4.4.2 Kit Kat si ParanoidAndroid.
LG mara ọkwa ama ama 5.5 nke anụ ọhịa GX
LG ga - amalite GX n’oge na - adịghị anya na South Korea, a na - atụ anya na ọ ga - abata mba ụwa n’ọnwa na - abịanụ.
LG G Flex Mgbanwe Agbanwe Agbanwe Curved Screen ekwentị nkọwapụta na Images
The kacha mma ama na a mgbanwe curved ihuenyo bụ LG G Flex na Qualcomm si Snapdragon 800 mgbawa, na-a ọnụ na-enye ndetu.
Nzọụkwụ nzọụkwụ iji chekwaa folda EFS nke LG LG G2 na ụdị ya niile.
LG G2, Android 4.2.2 Rom na arụmọrụ LG G-Flex
Lee, m wetara gị ụzọ iji wụnye gam akporo 4.2.2 Rom a dabere na LG firmware nke ga-agụnye ọrụ ọhụrụ nke LG G-Flex na LG G2.
LG ga-eyigharịrị LG G2 na gam akporo 4.4 Kit Kat ruo ọnwa Machị
Dabere na Tweet na LG Electronics 'Twitter, a ga-eyigharịrị arụmọrụ nke gam akporo 4.4 Kit Kat nke LG G2 ruo Machị 2014.
Differentzọ atọ dị iche iche iji weghara ihuenyo na LG G2
Ndị a bụ ụzọ atọ dị iche iche iji weghara ihuenyo LG G2 na-enweghị ntinye nke ngwa ndị ọzọ.
Otu esi eme ka LG G2 si na gam akporo na Android 4.3.1
Nzọụkwụ nzọụkwụ site na ihe niile ịchọrọ iji melite LG G2 na gam akporo 4.3.1 iji Rom Nightly si CyanogenMod 10.2.
Etu esi wụnye mgbake gbanwere na LG G2
Usoro nkuzi zuru ezu iji wụnye ihe gbanwere gbanwere na LG G2 yana ihe niile ịchọrọ.
LG Optimus G, Rom CM11 na-akwadoghị gam akporo 4.4 Kit Kat
A senseshional Rom Android 4.4 Kit Kat maka LG Optimus G E975 na-akwado site na echiche ndị dị iche iche na mmepe gam akporo.
A gam akporo 4.4 Kit Kat maka LG G2 tupu njedebe nke afọ
Ọ bụrụ na asịrị ndị asịrị ahụ kwadoro, LG nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ izizi iji melite ngwaọrụ ya dịka LG G2 ma ọ bụ LG Optimus G ka Android 4.4 Kit Kat na eze.
Etu esi agbanwe usoro LG G2 D-800, D-802, D-803, V-380 na F-320K
Nkuzi nzọụkwụ site na ntinye ihe niile ị chọrọ iji gbanye LG G2 mfe.
Etu esi melite LG Optimus G na gam akporo 4.4 Kit Kat
Nke a bụ ihe niile ịchọrọ ịma iji melite LG Optimus G na gam akporo 4.4 Kit Kat.
LG G Flex na AnTuTu karịrị G2 ma jiri ihuenyo 720p
Na akara anabatara na AnTuTu, LG G Flex gụrụ akwụkwọ karịa G2 mana nwere mkpebi ihuenyo dị ala karịa aha ya.
LG G Pad 8.3 bịarutere Korea na October 14 na ụwa site na njedebe nke afọ
LG chọrọ ịbịaru ahịa mbadamba na mgbakwunye ọhụrụ a na-akpọ LG G Pad 8.3 nwere ezigbo ngwa ọrụ arụpụtara na njedebe nke afọ ụwa.
Download ụda dị egwu nke LG Optimus G2 maka gam akporo ọ bụla
Taa, anyị chọrọ isoro gị niile kerịta ngwugwu zuru oke nke ụda mbụ nke LG Optimus G2